काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद लालबहादुर थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको राजीनामा माग गरेका छन्। बजेटमा बिभेद गरेको भन्दै सांसद थापाले बुधबार प्रतिनि...
प्रदेश सरकारहरूले ०७६/७७ का लागि बजेट पेस गरेका छन्। प्रदेशहरूले संघीय सरकारकै सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्। चालु ...
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट ल्याउने कार्यलाई तिव्रता दिएका छन । सोही अनुरुप सातवटै प्रदेशले आज वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नै सातवट...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त संस्थानहरु मर्ज गरिने उद्घोष गरेका छन । उनले मर्जरका लागि तयार रहन सबै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सचेत गराए । गभर्नर नेपालले असार म...
काठमाडौं । भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) र भन्सारका एजेन्टको विवादका कारण जोगवनी नाका ठप्प भएको छ । भारतीय निकायबीचको विवादका कारण तेस्रो मुलक र भारतबाट आउने सामग्री नेपाल आउन सकेका छैनन । मालबस्तु चेकज...
जनता बैंकका ६ शाखाहरुबाट एक साथ कारोवार शुुभारम्भ
काठमाडौं । जनताको जनप्रिय बैंक जनता बैंकले देशको ग्रामिण तहसम्म बैकिंङ पहुँच पु¥याई सहज र सरल वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार शाखा विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड...
बजेटमा करको दर बढेसँगै मनपरी मूल्यवृद्धि
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजारमा अधिकांश सामानको मूल्य बढेको छ । बजेटमा करका दर बढेसँगै बजारमा व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी ढंगले मूल्य बढाएका हुन् । ...
अवैध धन थुपार्ने थलो बन्दै सहकारी
बैंकहरु स्रोत नखुलेका रकम बचत गर्न मान्दैनन् । आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन् । तर, सहकारीहरु भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समय अवैध आर्जन गरेको रकम ...
विश्व बैङ्कले नेपालको यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सेवा र कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक वृद्धि भएकाले उच्च वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको हो । विश्व बैङ्कका अनु...
व्यापार घाटा बढे पनि आर्थिक बृद्धिदरमा कमि नहुने: विश्व बैंक
काठमार्डौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशतले बढ्ने जनाएको छ । विहिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक आर्थिक बृद्धिदर ७.१ प्रतिशत प...
आनीकाे शंकास्पद रकम मेगा बैंकद्वारा रोक्का
काठमाडौं । गायिका आनी छोइङ डोल्माको रकमको स्रोत नखुलेपछि मेगा बैंकले रोक्का गरिदिएको छ । आनीले हङकङबाट १५ करोड ‘शंकास्पद’ रकम नेपाल भित्र्याएको भन्दै मेगा बैंक नेपालले रोक्का गरिदिएको हो । उक्त रकम ह...
चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ । लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय म...
धर्म हुने भन्दै पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन् । चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने पनि हुँदा रहेछन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो ...
मानव संसाधनका क्षेत्रमा बजेट बृद्धि गरिएको छ: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माानव संशाधनका क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष बजेट बृद्धि गरेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले मानव संशाधनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्...
हिमालयन हाइड्रोको आईपिओ निष्काशनको बिक्री प्रबन्धक क्यापिटल नियुक्तमा जनता
काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले आईपिओ निष्काशन गर्न जनता क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हिमालयन हाइड्रोले रु. १००/(अंकित दरको २२ लाख ५० हजार कित्ताको२२ करोड पचास लाख रुपैंया ...
किन मागे अर्थमन्त्री खतिवडाले माफि ?
काठमाडौं । बजेट र बजेटसँग सम्बन्धीत संसदमा पेश गरिने दस्तावेजहरुमा व्यापक त्रुटि फेला परेको छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा त्रुटि फेला परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षदलले संसदको ...
एजेन्सी । २१ औं शताब्दीलाई डिजिटल संगीतको सेवा प्रदान गरिरहेको आइट्युन बन्द हुने भएको छ । ०१ जनवरी ९ मा एप्पलका सहसंस्थापक र पूर्व कार्यकारी अधिकारी स्टिभ जब्सले म्याकवल्र्ड एक्सपो एप्पलको आइट्युन सफ...
सांसदलाई छुट्याएको ६ करोड बजेटबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर
काठमाडौं । सांसदलाई छुट्याएकाे ६ करोड रूपैयाँ बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदातलतमा रिट दायर भएको छ । यहि जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सांसद निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ६ करोडका द...
विश्वकै लामो यात्रुवाहक केवलकार ‘वीरेठाँटी—मुक्तिनाथ केबलकार’ निर्माण हुने
धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल मुक्तिनाथ धामसम्म केवलकार निर्माण हुने भएको छ । कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म निर्माण गरिने प्रस्तावित सो यात्रुबाहक केवलकारको विस्तृत् परियोजना प्र...
नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध गराउन प्रयासरत अमेरिकाले हालै सार्वजनिक एक रिपोर्टमा नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय समेटेको छ । अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा जारी सो रिपोर्टमा...